Ihe Gbasara Ime Mgbaasị Na-amasịkarị Ndị Mmadụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
“Fim ndị amusu na ndị nwụrụ anwụ, nyenụ ohere. Ọ bụzi fim ndị mmụọ ọjọọ ji na ndị na-achụpụ ha na-ewuzi.”—The Wall Street Journal.
ỌTỤTỤ akwụkwọ, fim na egwuregwu kọmputa ndị e nwere taa na-ejupụtazi n’ihe gbasara ndị amusu na ihe ndị ọzọ gbasara ndị mmụọ ọjọọ. Gịnị mere ihe ndị a ji na-amasịkarị ndị mmadụ?
Otu ọkachamara n’ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya aha ya bụ Claude Fischer, sịrị: “Ndị kweere ná mmụọ ndị nwụrụ anwụ na-akarịzi akarị n’oge ndị a n’Amerịka. Mgbe mbụ, ọ bụ ihe dị ka otu onye n’ime mmadụ iri kweere na ya. Ma ugbu a, ọ bụzi ihe dị ka mmadụ atọ n’ime mmadụ iri. N’Amerịka, ndị na-eto eto garala na nke ndị na-eme anwansi, ndị kweere ná mmụọ ndị nwụrụ anwụ, ma ọ bụ ndị kweere na e nwere ụlọ ndị nwụrụ anwụ bi, ji okpukpu abụọ karịa ndị dimkpa kweere n’ihe ndị ahụ.”
Ọ bụghị ihe ịtụnanya na akụkọ gbasara ndị mmụọ ọjọọ ijide ndị mmadụ jizi nwayọọ nwayọọ na-eju ebe niile ugbu a. Michael Calia kwuru n’otu akwụkwọ a na-akpọ The Wall Street Journal, sị: “Ndị mmụọ ọjọọ ji na-akarịzi akarị. Otu ihe kpatara ya bụ na ime mgbaasị na ịta amusu jupụtaziri na fim nakwa na tiivi kemgbe afọ iri gara aga.”
Otu nchọpụta e mere gosiri na “e kee ndị nọ n’ụwa ụzọ iri, ihe dị ka ụzọ abụọ ruo ụzọ ise kweere ná mmụọ ndị nwụrụ anwụ. O jukwara n’akwụkwọ ọdịbendị nke ọtụtụ obodo.” Nchọpụta prọfesọ Christopher Bader na prọfesọ Carson Mencken mere n’Amerịka “mere ka a mata na mmadụ asaa ma ọ bụ mmadụ asatọ n’ime mmadụ iri ọ bụla nọ n’Amerịka kwetasiri ike n’otu ụdị mgbaasị ma ọ bụ ọzọ.”
Ma, mmadụ iji ihe ndị gbasara mgbaasị na-eme onwe ya obi ụtọ ọ̀ bụ ihe na-enweghị ihe o mere?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ihe Gbasara Ime Mgbaasị Na-amasịkarị Ndị Mmadụ
È KERE YA EKE? Otú Aṅụ Si Efedata
OBODO NA NDỊ BI NA YA Mgbe M Gara Spen
IHE BAỊBỤL KWURU Obe
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere TETA! Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ime Mgbaasị?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ TETA! Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ime Mgbaasị?
TETA! Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ime Mgbaasị?